အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းစက် - Earldom
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းစက်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Earldom.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Earldom.
ဤထုတ်ကုန်သည်ပတ်0န်းကျင်ကိုကူညီနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမှာ၎င်းသည်စွမ်းအင်နည်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစွမ်းအင်ဝယ်လိုအားလျော့နည်းသွားသောကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးဌာန၌ပါဝါလျော့နည်းရန်လိုအပ်သည်။.
အမှု - 01
Guangzhou Eyldom Electionyonic Technology Co.ltd Techning 2019
Guangzhou Earldom Electronic Technology Co.ltd Team လှုပ်ရှားမှု 2019 ။
Multi Stripe T ဟု C Card Reader Mobile Mobile Mobile Phy Mobile Myanmar PDB C PD Card Reader Online SD အမျိုးအစား C USB HUB
Earldom China Earldom CC3 QC QC QC QC 3.0 နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်းကားအားသွင်းစက်ထုတ်လုပ်သူများ - Earldom, ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးသည်ကြွယ်ဝပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။QC အမြန်. ငွေသွင်းခြင်း QC 3.0 နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်းကားအားသွင်းစက်12-24v မော်ဒယ်များသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ကား SUV ကား၏အရွယ်အစားကားများနှင့်အခြား Mainstream Models များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်Huawei ၏ Super Fast Charge, PD, AFC, QC4.0 အတွက်အထောက်အပံ့ MTKPE အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်း
ကိစ္စ 1 ။
Qi Car Charger Input: DC 5V / 2A 9V / 1.67A output: DC 5V 1A 9V / 1.1A ပါဝါ: 15w【 15W Fast charging 】 output power သည် 15W အထိရှိပြီးမြင့်မားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၏ခိုင်မာသောလျှပ်စစ်သံလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းစနစ်သည်အားသွင်းရန်အချိန်နည်းသောအချိန်ဖြုန်းခြင်းဖြင့်မြန်နှုန်းမြန်နှုန်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။